कोरोनाभाइरसको खोप बनाउन कसरी चुक्यो विश्व ? – HostKhabar ::
कोरोनाभाइरसको खोप बनाउन कसरी चुक्यो विश्व ?
बीबीसी : सन् २००२ मा चीनको ग्वाङझाउ प्रान्तमा एउटा अन्जान भाइरसका कारण महामारी फैलियो । उक्त भाइरसलाई वैज्ञानिकहरुले ‘सार्स’ नाम दिए ।
सार्सको अर्थ ‘सिनियर एक्युट रेसपिरेटरी सिन्ड्रोम’ अर्थात् यस्तो रोग जो मानिसलाई श्वास लिन कठिन तुल्याउँथ्यो ।वैज्ञानिकहरुले कोरोनाभाइरसका कारण सार्सको संक्रमण भएको कुरा पछि गएर पत्ता लगाए । यो भाइरस जनावरबाट सुरु भएर मानिसमा सरेको तथ्य विभिन्न अनुसन्धानबाट प्रकाशमा आएको थियो ।
त्यतिबेला यो भाइरस केही महिनामै २९ देशमा फैलियो । यसबाट ८ हजारभन्दा बढी मानिस संक्रमित भए भने ८ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो ।त्यतिबेला सिङ्गो विश्व नै यो संक्रमणको खोप कहिले तयार होला भन्नेमा चिन्तित थियो । युरोप, अमेरिका र एसियाका दर्जनौँ वैज्ञानिकले निकै तिव्रताका साथ यसको खोप बनाउने दिशामा काम थाले । कयौँ क्लिनिकल परीक्षणका लागि तयार भएका थिए ।
तर त्यतिबेला नै सार्सको महामारी नियन्त्रणमा आयो । लगत्तै कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि जारी सम्पूर्ण अनुसन्धानहरु बन्द गरियो ।
केही वर्षपछि अर्थात्, सन् २०१२ मा एउटा अर्को प्राणघातक कोरोनाभाइरस ‘मर्स–कोभ’ (मिडिल इस्ट रेसिपेरिटी सिन्ड्रोम) को प्रकोप देखियो । यो संक्रमण ऊँटबाट मानिसमा सरेको थियो ।
हाल नयाँ कोरोनाभाइरस ‘सार्स–कोभ–२’ ले करिब १५ लाख मानिसलाई संक्रमित तुल्याएको छ । फेरि एक पटक विश्वमा चिन्तासँगै प्रश्न उठ्न थालेको छ कि यसको खोप कहिलेसम्म बन्छ होला ?
प्रश्न उठ्न थालेको छ, कोरोनाभाइरसको पछिल्ला आक्रमणले कुनै पनि बेला कोभिड–१९ जस्तो घातक संक्रमण फैलाउन सक्छ र विश्वमा महामारीको रुप धारण गर्न सक्छ भन्ने कुराको पाठ हामीले किन सिक्न सकेनौँ ? किन यसको खोप बनाउने दिशामा अनुसन्धानलाई त्यतिबेला नै अघि बढाइएन ?
अमेरिकास्थित ह्युस्टनमा वैज्ञानिकको एउटा समूहले भने कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप बनाउने काम छोडेको थिएन ।
सन् २०१६ मै उनीहरु आफ्नो प्रयासमा सफल पनि भए । उनीहरुले कोरोनाभाइरसको खोप त्यतिबेला नै तयार पारे ।
डा. मारिया टेक्सासको बाल अस्पतालको खोप विकास सेन्टरकी सहनिर्देशक पनि हुन् ।
उनले अगाडि भनिन्, ‘त्यसपछि हामी युएस नेशनल इन्स्टिच्यूट अफ हेल्थमा पुग्यौँ र हामीले विकास गरेको खोपलाई चाँडै क्लिनिकसम्म लैजान के गर्न सकिन्छ भनेर सोध्यौँ । तर उनीहरुले तत्काल आफूहरुलाई यसमा रुची नरहेको बताए ।’
जब महामारी अन्त्य भयो
उक्त खोप सन् २००२ मा फैलिएको सार्स महामारीविरुद्ध तयार पारिएको थियो । उक्त महामारी सुरुवात भएको मुलुक चीनमै संक्रमण नियन्त्रणमा आइसकेको थियो । त्यसैले खोपका लागि अनुसन्धानमा जुटेका वैज्ञानिकहरु रकम जुटाउन सक्ने अवस्थामा रहेनन् ।
उनीहरुले कोरोनाभाइरसको खोप बनाउनेबारे अनुसन्धान त्यसै रोकेका थिएनन् । विश्वका कयौँ वैज्ञानिकले आफ्नो अनुसन्धान उक्त संक्रमणको त्रासदीमा आएको कमीका कारण रोकेका थिए । त्यसमा मानिसहरुको रुची कम हुँदै गएको थियो । त्यसैले कतिपय वैज्ञानिकले अनुसन्धानका लागि पैसा जुटाउन सक्ने अवस्था रहेन ।
पेनसिलभेनिया विश्वविद्यालयमा माइक्रोबायोलोजीकी प्रोफेसर सुजैन भिजका अनुसार ७–८ महिनामै महमारी अन्त्य भएका कारण सरकारहरु र औषधि कम्पनीहरुले कोरोनाभाइरसको अध्ययनमा रुची देखाएनन् ।
उनले भनिन्, ‘साथै सार्सको असर एसियामा बढी देखिएको थियो, क्यानाडामा यसको संक्रमण थोरै देखियो तर युरोपसम्म संक्रमण पुगेन । अहिलको कोभिड–१९ जस्तो रुप सार्सले लिन पाएन ।’
सार्स र मर्सलाई विशेषज्ञहरुले ‘खतराको पूर्वसूचना’ मानेका छन् । उनीहरुका अनुसार ती दुवै संक्रमणले कोरोनाभाइरसको खतराप्रति सचेत गराएका थिए । उक्त चेतावनीलाई नजरअन्दाज गरिनुहुँदैनथ्यो र खोपबारेको अनुसन्धानलाई निरन्तर अघि बढाइनु पथ्र्यो भन्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
डा. मारियाले त्यतिबेला तयार पारेको खोप अहिलेको कोभिड–१९ का लागि होइन, त्यो बेला देखिएको सार्सको संक्रमणका लागि थियो । तर त्यो बेला खोप विकास गरिएको भए अहिले कोभिड–१९ को खोप बनाउन निकै सहज हुने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
येल युनिभर्सिटीमा स्कुल अफ पब्लिक हेल्थका प्रोफेसर जेसन स्क्वार्टज भन्छन्, ‘कोभिड १९को महामारीविरुद्धको तयारी हामीले सन् २००२ को सार्स महामारीकै समयदेखि गर्नुपर्दथ्यो ।’
उनले अगाडि भने, ‘यदि हामीले सार्स खोपको प्रोग्रामलाई बीचमै नछोडेको भए नयाँ कोरोनाभाइरसमाथि अनुसन्धान गर्न हामीसँग निकै आधारभूत अध्ययन उपलब्ध हुन्थ्यो ।’
नयाँ भाइरस सार्स–कोभ–२ पनि त्यही कोरोना परिवारको जीवाणु हो जसले सन् २००२ मा सार्स महामारीलाई जन्म दिएको थियो ।
डा. मारियाका अनुसार दुवै जीवाणुमा अनुवांशिक रुपमा ८० प्रतिशत समानता छ । उतिबेला खोपको प्रारम्भिक प्रक्रिया पूरा भइसकेका कारण नयाँ कोरोनाभाइरसका विरुद्ध पनि चाँडै प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो ।
बायोटेक कम्पनी आरए क्यापिटलका निर्देशक तथा जीवाणु विज्ञेषज्ञ पीटर कोलचिन्स्की भन्छन्, ‘त्यो खोपको कुनै बजार थिएन, त्यसैले उक्त खोपका लागि त्यतिबेला रकम दिन बन्द गरियो ।’
उनका अनुसार अहिले कोरोनाभाइरसका लागि सयौँ खोप छन् तर ती पशु तथा पन्छीका लागि तयार पारिएका हुन् ।
उनी भन्छन्, ‘समस्या यो छ कि कुनै पनि कम्पनीका लागि वर्षौँ या दशकौँसम्म प्रयोगको टुङ्गो नहुने या सायदै कहिल्यै प्रयोग हुने कुनै उत्पादन गर्नु एउटा खराब कारोबारको प्रस्ताव हो, यो त त्यस्तो कुरा हो जसमा सरकारले लगानी गर्नु पर्दथ्यो ।’
आजको सत्य भनेकै कोभिड–१९ को खोप चाहिएको छ । आगामी एक या डेढ वर्षसम्म यस्तो खोप तयार हुने सम्भावना निकै कम छ । त्यतिबेलासम्म कोरोनाभाइरसको महामारीलाई नियन्त्रणमा लिइसक्ने सम्भावना पनि निकै कम नै छ ।